AC Milan Oo Uvdhaqaaqday Saxiixa Daafaca Kooxda Chelsea Fikayo Tomori
HomeHoryaalka IngiriiskaAC Milan oo uvdhaqaaqday Saxiixa Daafaca Kooxda Chelsea Fikayo Tomori
January 12, 2021 Horyaalka Ingiriiska, Horyaalka Italy, Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha Maanta 0
Daafaca kooxda Chelsea Fikayo Tomori ayaa lagu soo waramayaa inuu u soo muuqday bartilmaameedka amaahda ee kooxda AC Milan .
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka England ayaa ku jiray qeybtii hore ee jahwareerka xilli la siiyay kaliya 235 daqiiqo oo kubada cagta ah afar kulan oo uu saftay.
Tababare Frank Lampard ayaa qirey dhamaadka usbuuca in 23 jirkaan uu amaah ku aadi karo si uu waqti joogta ah u helo.
Sida uu sheegayo saxafiga reer Talyaani ee Fabrizio Romano , Milan waxay xiriir la sameysay madaxda Blues si ay wax uga weydiiso helitaanka Tomori.
Inkastoo ciyaaryahanka Strasbourg Mohamed Simakan la sheegay in loo arko dooqa koowaad ee Milan, hadana waxay u badan tahay inay u dhaqaaqaan Tomori hadii aysan heshiis la gaari karin kooxda reer France.
Tababaraha Milan Stefano Pioli ayaa isha ku haya inuu xoojiyo daaficiisa madaama Rossoneri ay isku dayayso inuu ku guuleysto Serie A iyo Europa League.